U-Elon Musk kwi-SNL uthetha ngeDogecoin, kunye nokuwa kwedoge (ngoMeyi 8, 2021) -Cazoo
U-Elon Musk kwi-SNL uthetha ngeDogecoin, kunye ne-doge collapses (8 ngoMeyi 2021)
Ikhaya » Ikhaya » U-Elon Musk kwi-SNL uthetha ngeDogecoin, kunye ne-doge collapses (8 ngoMeyi 2021)
tag: Dogecoin, uElon Musk
U-Elon Musk, u-CEO we-Tesla kunye ne-SpaceX, izinto ezimbini eziyimpumelelo kubudala bethu bezobuchwephesha, wayengumlingani (co-presenter) wesiqendu somdlalo odumileyo waseMelika ohlekisayo woMgqibelo ebusuku. Isiqendu esasasazwa ngorhatya lwango-Meyi 8, 5.30 ngexesha lase-Italiya.
U-Elon Musk kunye nomama uMaye Musk
Ngokucacileyo, njengomxhasi omkhulu, ubhengeze kwiintsuku zamva nje ukuba Ngewayethethile ngoDogecoin, meme yonk 'intandokazi yemali yedijithali. Kwaye wonke umntu wayecinga ukuba… 🚀
Endaweni yokuba itshathi ingenanceba: Ixabiso likaDogecoin liqale ukuhla kwakamsinya ukuphela kwayo, kunye nekhandlela ebomvu ebomvu, isuka kwi- $ 0,66 ukuya kwi-0,53 yeedola ngeyure.
Ixabiso leDogecoin, ixesha elikwi-1h
Ngexesha elinye lamacandelo aziwayo omboniso, uHlaziyo lwempelaveki oluHlaziyiweyo olwenziwe ngabalinganiswa basentsomini abanjengoNorm McDonald, uMusk wazazisa njengososayensi wezemali ongaziwayo, uLloyd Ostertag, kwaye wacelwa ukuba achaze ukuba yintoni kanye le Dogecoin.
"Enkosi uMichael, ndibize ngokuba nguDogefather," watsho uMusk kuMichael Che.
"(UDogecoin) waqala njengesiqhulo esisekwe kwi-Intanethi, kodwa ngoku sithathiwe ngendlela eyiyo," ucacisile uMusk.
Ngubani owaphinda wabuza uMusk ukuba yayiyintoni na kanye, ekhupha ibhilikhwe epokothweni yakhe wayijikisa phantsi kwempumlo kaMusk, wade wambuza nokuba i-cryptocurrency iyinyani na.
"Yinyani njengale dollar," kusho uMusk.
UColin Jost utsibe isenzo, de wabuza nokuba yintoni kanye kanye le Dogecoin.
Yikamva lemali, sisithuthi esingenakunqandeka esiza kuthatha umhlaba, utshilo uMusk.
Kwaye xa echaza ukuba i-cryptocurrensets ingatshintshiselana ngemali, u-Che wathi, "Oo, yingxabano." (kukuxokozela!)
"Ewe, sisiphithiphithi," watsho uMusk ehleka xa ekhwaza "enyangeni!" (Kwinyanga! 🚀)
Ngaba uyafuna ukubona ividiyo? Nantsi:
Nantsi ikliphu ka-elon musk ecacisa ukuba yintoni imali ye doge ekwi-SNL… uthe kukuxakeka 😂 Nantsi le nto
Niffauw (@RustigNiffauw) Ngamana 9, 2021
4.4 kwiinkwenkwezi ezi-5(1962)
€ 3,99 (ukusukela nge-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
4.2 kwiinkwenkwezi ezi-5(757)
€ 24,89 (ukusukela nge-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
IHygrometer yeThermometer yaNgaphakathi ye-NOKLEAD-Isalathisi seDijithali esineSensom yokuJonga uBubushushu, iMeta yokuHumidity ephathwayo echanekileyo yegumbi lokuJonga i-Ambient Room
4.5 kwiinkwenkwezi ezi-5(12625)
4.7 kwiinkwenkwezi ezi-5(1433)
€ 90,00 (ukusukela nge-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
4.6 kwiinkwenkwezi ezi-5(2631)
€ 34,99 (ukusukela nge-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
4.2 kwiinkwenkwezi ezi-5(1230)
€ 11,40 (ukusukela nge-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)